Inona no jerena ao amin'ny tanànan'i Ourense galisiana | Vaovao momba ny dia
Ourense dia tanàna iray any Galicia, renivohitry ny faritany tsy fantatra anarana. Ity tanànan'ny Galicia ity dia malaza amin'ny rano mafana, satria toerana manan-tantara io. Izy io dia fantatra amin'ny anarana hoe City of Burgas ho fanomezam-boninahitra ireo loharano mafana izay mipoitra amin'ny teboka maro. Miampita renirano maromaro izy io, ny Miño no zava-dehibe indrindra. Tanàna izay mendrika hitsidika tokoa.
Andao hojerentsika ny sasany amin'ireo teboka mahaliana izay ananan'ny tanànan'i Ourense. Tanàna feno lova, tantara ary faritra fialamboly mifandraika amin'ny rano mafana ao aminy. Izany rehetra izany dia mahatonga ity tanàna ity fialantsasatra tsara ho an'ny olona maro.
1 Valan-javaboary San Lázaro
3 Cathedral of Ourense
4 Tranombakoky ny Ourense
6 Tetezana ao Ourense
Valan-javaboary San Lázaro
Ity valan-javaboary ity dia lasa ivon'ny Ourense maoderina indrindra, toeram-pivoriana ary toeram-pivoahana ho an'ny olona ao Ourense. Ao amin'ity valan-javaboary ity dia afaka mahita loharano mahafinaritra iray isika izay nafindra tao amin'ny Monasiteran'ny Oseira fanta-daza. Manodidina ny valan-javaboary no ahitantsika ireo trano fitantanan-draharaha eto an-tanàna, ary koa ireo toerana izay mandrisika ny asa toekarena ao amin'ilay faritra. Tao amin'ity valan-javaboary ity no nisy ny hopitalin'ny mpivahiny, antsoina koa hoe lazaretto, ka io no anarany ankehitriny. Nampiasaina koa izy io ho toeran'ny fampirantiana fa rehefa mandeha ny fotoana dia nampihena izany tamin'ny fametrahana ireo trano fitantanan-draharaha ao amin'ity faritra ity. Androany dia misy valan-javaboary maro ho an'ny ankizy ary afaka mahita sary sokitra toa an'i O Carrabouxo ihany koa isika, toetra malaza amin'ny sariitatra hita ao amin'ny gazety La Región.
La Plaza Ben'ny tanàna no foiben'ny faritra manan-tantara ao Ourense, teboka tonga lafatra hankafizana ny tanàna. Amin'ity kianja ity dia ahitantsika ny sasany amin'ireo tsangambato manan-danja indrindra ao an-tanàna, tsy ara-dalàna ny drafitra ary manana ny mampiavaka azy somary mirona. Azontsika jerena ny lapan'ny tanàna sy ny endrik'ireo trano tamin'ny taonjato faha-XNUMX sy faha-XNUMX. Amin'izao fotoana izao dia mahita faritra terrasika tena mahaliana izahay hiala sasatra tsotra izao.
La katedraly dia iray amin'ireo ampahany lehibe amin'ny tanàna taloha, manodidina izay nivoaran'ny tanàna tamin'ny vanim-potoana medieval. Ny fiandohany dia nanomboka tamin'ny taonjato faha-XNUMX sy faha-XNUMX fa nandritra ny taonjato maro dia novaina izy io, noho izany dia hitantsika ny fomba sasany toy ny tara Gothic. Ny fidirana dia amin'ny faritra atsimo ao Puerta del Trigo. Ny vavahady avaratra dia Romanesque, na dia nampiana antsipiriany Gothic aza taty aoriana. Eo amin'ny lafiny atsinanana dia ahitantsika ny iray amin'ireo ampahany manandanja indrindra, ny vondrona mpanao sary sokitra an'ny Pórtico del Paraíso. Ny teboka mahaliana hafa rehefa mitsidika ny katedraly dia ny Main Chapel, ny Chapel of Santo Cristo na ny Treasures an'ny katedraly.
Tranombakoky ny Ourense
Ao amin'ny tanànan'i Ourense dia afaka mahita tranombakoka mahaliana ihany koa isika. ny Tranombakoky ny fitafiana nentim-paharazana galisiana Mety ho fomba tsara iray hankafizana ny kolontsaina malaza, hahitana zavatra bebe kokoa momba ny fomba amam-panao galisiana. Tranombakoka iray hafa ny Boys 'Circus, izay mety hahaliana. Tsy maintsy mijanona amin'ny tranombakoka monisipaly koa ianao, izay miorina amin'ny trano fomba Renaissance tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Izy io dia manana fampirantiana vonjimaika ary koa fampirantiana maharitra miaraka amin'ny singa arivo mahery avy amin'ny mpanakanto avy amin'ny faritany, izay tranombakoka manan-danja indrindra ao an-tanàna.
Ny loharano voajanahary an'ny Satria i Burgas dia ampahany amin'ny tantaran'ny hydrotherapy an'ity tanàna ity ary manana tantara mihoatra ny roa arivo taona. Tao amin'ity tranonkala ity no teraka ny toeram-ponenana romanina Aquis Aurienses, teo akaikin'ny rano mineraly mineraly. Androany isika dia mahita komplekana mahafinaritra iray izay tsidihin'ny olona avy amin'ny lafivalon'ny fiaraha-monina sy avy any ivelany mba hitadiavana ireo toetra mahasitrana mahasitrana na hankafy toerana malalaka fotsiny. Amin'ity faritra ity dia azontsika atao ny mitsidika ny Interpretation Center raha te hahalala antsipiriany misimisy momba ny loharano mafana sy ny tantaran'izy ireo ary mazava ho azy fa tsy afaka mitsahatra amin'ny fandroana ao anaty rano izy ireo.
Tetezana ao Ourense
Ity tanàna ity dia niampitan'ny Miño sy renirano roa hafa ary izany no antony maha-tanàna miavaka amin'ny tetezana misy azy. Anisan'izany dia ilaina ny miresaka Tetezana Millennium, tandindon'ny tanàna ankehitriny indrindra ary maoderina. Izy io dia manana endrika mamaky tany sy maoderina ary mahagaga ihany koa satria manana lalambe avo be miakatra hatramin'ny 22 metatra, izay manome antsika fahitana mahatalanjona momba ny Miño sy ny tanàna. Raha te-hiverina amin'ny tantaran'ny tanàna isika dia mila mankany amin'ny Bridge Tetezana, tetezana romana izay dingana stratejika ho an'ny tanàna nandritra ny taonjato maro. Ity tetezana ity dia naorina tamin'ny taonjato faha-XNUMX ary nambara ho tsangambato ara-javakanto ara-tantara. Ao amin'io tetezana io no misy ny Camino Mozarabe-Ruta de la Plata izay mankany Santiago de Compostela.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Inona no jerena ao amin'ny Ourense